Ndizisusa njani iWindows? - Faq
Eyona > Faq > Ukucutha i-pc yam-esona sikhokelo sigqibeleleyo
Ukucutha i-pc yam-esona sikhokelo sigqibeleleyo
Ndizisusa njani iWindows?
KwiIWindows10 vula ukuqala> Useto> iiNkqubo> iiapps kunye neempawu. Khetha usetyenziso okanye umdlalo okhutshelweyo kwifayile yeIWindowsGcina, emva koko ucofe u-Hambisa. Cofa ku Khetha idrive yokuhambisa le app ku: uluhlu lwebhokisi, khetha idrive emele ikhadi lakho le-SD emva koko ucofe u-Hambisa.Sep 25 Ngo-2017
Xa unamathele kwi-PC esezantsi, enye yezona zinto ziphazamisayo ukubona yindlela Windows 10 ziqhakaza ngohlaziyo olunye, ukuchitha ngakumbi nangakumbi izixhobo zakho zePC oqhele ukuzisebenzisa ukwenza iinkqubo okanye ukwenza eliChannel. Dlala imidlalo.
Akumangalisi ukuba inqaku elilungiswa yiWindows ngokwalo liphezulu kuluhlu lwezihloko eziceliweyo. Ngaphambi. Masiqale ngento esifuna ukuyiphumeza apha.
Kwiimeko ezininzi, umdlalo awuqhubeki kwintsebenzo oyifunayo ngenxa yebhotile ye-GPU, kwaye ngokokulinganisa kwam, ukutshintsha iiWindows akunampembelelo ekusebenzeni kweGPU, ngakumbi kwimowudi epheleleyo yesikrini. IWindows isebenzisa isixa esibalulekileyo se-RAM nokuba ayisebenzi kwaye inee-spikes ezingahleliwe kusetyenziso lwe-CPU. Umzekelo, ndikhangele ikhompyuter yam yeAthlon 200GE ukufakelwa okutsha kunye nokuhlaziywa ngokupheleleyo kweWindows 10 kunye ne-1.6 GB ye-RAM evulekileyo ngaphandle kokuqhubeka, kunye nokuvula ii-spikes ezilindelekileyo ekusetyenzisweni kweCPU. I-8 GB inokuba sele iphantsi kwimidlalo ethile ukuba ezi-2 zazo zisetyenziswa njengeVRAM ye-GPU edityanisiweyo kwaye iphantse 2 ngaphezulu ngeWindows, imeko apho isiqingatha se-RAM sele sithathiwe yiWindows.
Kodwa ndaye ndagqiba kwelokuba ndiqhubeke. Le Intel Stick ine-2 GB ye-RAM kuphela! Le Intel Atom PC isebenzisa Windows 10 32 ukugcina imemori ethile, kodwa isebenzisa i-1.2 GB ye-RAM, engaphezulu kwe-60% yememori iyonke ekhoyo.
Abaqhubi be-cyber acoustics
Ukuba ufuna ukunciphisa oko, unokwenza ntoni? Inketho 1 kukufaka inkqubo endala kodwa ixhaswe njenge Windows 7 ... enzima njengoko ingasaxhasi izinto ezithile ezinje ngePocket2's eMMC yokugcina, eyenza ukufakwa kube nzima kakhulu. ii-PC ezintsha ezincinci.
Ukhetho 2 kukufaka Windows 10 UkuKhanya, VERY hack engaqondakaliyo Windows 10 ejolise ekusebenziseni izixhobo ezimbalwa ngangokunokwenzeka, oko kuthetha ukuba inkqubo yokusebenza inokukhutshelwa kumthombo ongakhuselekanga kwaye ezinye iinkqubo zisenokungasebenzi kakuhle Ubunzulu obungaphezulu olu khetho kwinqaku lam le-GPD Pocket 2. Eli nqaku likhetho 3, ngokuthatha akho akhoyo Windows 10 ufakelo kunye nokususa yonke into esinokuyenza ukuze kube lula. Masiqale ngo: Cacisa Windows 10! Okokuqala, makhe sixoxe ngezinto eziqhelekileyo.
Kukho iingcebiso ezininzi endikhe ndazibona kwisigidi kwi-intanethi xa ndikhangela isihloko seWindows Optimization, ezinje ngo: B. khubaza zonke izaziso, yiya kwiipropathi ezibonakalayo zeWindows kwaye njalo ukhethe eyona ndlela yokusebenza. Kuzo zonke iimvavanyo zam zokudlala, ezi zenza ecaleni kwento.
Ke ndiza kugxila kwabo apho ndinokulinganisa khona umahluko. Umzekelo, ukukhubaza ibha yomdlalo kukhetho ... isigqubuthelo esicaphukisayo Windows 10 inemidlalo yokuqinisekisa ukuba i-Game DVR, isoftware yeWindows erekhoda izinto zomdlalo, ikhubazekile kwaye isicwangciso samandla esiqhelekileyo sitshintsha sisebenze phezulu.
Oku kuluncedo ngakumbi kwiilaptops, ezihlala zisebenza kancinci kunamandla okusetyenziswa. Ukhe wayiva yonke, weva ukuba le yinto eqhelekileyo, kodwa akukakhankanywa ngokwaneleyo ukuba uqiniseke ukuba ujonga uMphathi weSebenzi wakho ukuba uqiniseke ukuba unciphisa inani lezinto eziqala ngalo lonke ixesha iibhutsi zakho zePC. Oku kuya kubaluleke ngakumbi ngoku ukuba sifumana ngonaphakade umdlalo wokuqalisa kwaye awufuni ukuba zonke ezi zinto ziqale ngokuzenzekelayo ngalo lonke ixesha ucima.
Qiniseka ukuba ucofa u-Run, emva koko msconfig kwaye ujonge ukuba zeziphi iinkonzo eziqalisiweyo ngeWindows. Fihla iinkonzo zeMicrosoft kwaye uzame ukususa uQaphela ukuba ezinye zezi nkonzo ziyafuneka. I-Steam ayizukuqhuba ukuba awuyiqali inkonzo yayo ukuqala kwaye ndiye ndabona ezinye zokuchasana nokusilela zikhubazekile kwaye ukuba inkqubo iyasilela ukuqala ukubona ukuba ufuna ukuyenza kwakhona.
Kulungile sigqibile ngale nto, ukhe wayiva le nto ngaphambili, nayo. Makhe siye kwizinto ezintle. Le debloat Windows 10, uthotho lweencwadi zeempendulo ezenziwe ngumyili we-Github Warhack, ukususa iinkonzo ezininzi kunye nee -apps ezisemgangathweni kangangoko kunokwenzeka Windows 10.
Mandiqonde ngoku ngoku. Obu buchule abuxhasi uHlaziyo loMdali kwaye aluxhasi kubuchwephesha kwiKhaya leWindows kwaye kubuchwephesha kubalawuli abaziyo into abayaziyo ndivavanye oku kuhlaziyo olupheleleyo Windows 10 Ikhaya lineziphumo ezilungileyo, kodwa ngenxa yothando lukaThixo wenza indawo yokubuyisela, Ngaphambi kokwenza oku, yenza isipele iifayile zakho, uyakwenza oku ngengozi yakho. Kulungile? Egqwesileyo.
Inyathelo 1. Yiya kuseto kwaye uhlaziye iifestile, hit tha t update iqhosha kwaye ufake yonke into de iWindows ihlaziywe kwaye akukho nto iseleyo yokuyihlaziya. Esi sisenzo esihle ngenxa yokuba iiWindows zinokuhlaziya ngasemva ngelixa udlala umdlalo kunye nokwenza iPC yakho icothe kakhulu ngaphandle kokwazi ukuba kutheni kukhutshwe uhlaziyo ndiye ndazibona zonke iiPC zam zovavanyo ngequbuliso zicotha.
Kwaye ukuba kunjalo, ukuba uqhuba lo mbhalo ngelixa iiwindows zihlaziya, izinto ezimbi zinokwenzeka .. qiniseka ukuba uhlaziyiwe.
Inyathelo 2: Khuphela izikripthi kwi-Github edityaniswe kwinkcazo. Yikhuphe kwaye uyibeke kwifowulda kwenye indawo onokuyikhumbula ngokulula, njenge-C, okanye ungayishiya kuKhuphelo kwaye uzame ukuhamba apho njengoko ndenzile ndisebenzisa iWindows Power Shell njengomlawuli nayo uyivule ngokunqakraza kuyo kwaye oku apho iba nomdla khona. Kuya kufuneka uhambe kwifolda ebizwa ngokuba 'zizikripthi'
Ngaba i-PC Decrapifier iyasebenza Windows 10?
Isicwangcisi sePCisimahla ukukhuphelaWindows 10,IWindows8,IWindows7,IWindowsXP, kunyeIWindows2000.Ngomhla woku-1 kuMatshi. 2021
Emva koko, uya kufumana uluhlu olukhulu lwazo zonke iinkqubo ezifakwe kwisixhobo sakho.
Uyabona ukuba ngubani umpapashi kwaye zonke izinto ze-Asus ongafuniyo ukuzenza apha inokuba kukulawulwa kwamandla e-ASA ukuze yonke imisebenzi yamandla yamva isebenze kodwa ungasusa ubhaliso lwe-ASA kwaye kude ne-Broadcom onakho ukuqala kunye nezixhobo zayo ezingenazingcingo aziyicimi kwaye amaqhosha e-coral aphumelele iDVD kwaye akukho mbulelo kuloo Google Chrome, esisandula ukuyifaka, kukho ezinye iinkqubo iinkampani zakho ze-Intel ezingakwaziyo ukuzisusa, kodwa singayilahla Yenza isuti yokhuseleko yeFeinternet kunye nedemo yeMicrosoftOffice iya kubona ukuba i-ASA ngokuqinisekileyo yenye yeelaptops endizifumene kutshanje, uHandson wam nyani wayengekho krwada njengomvelisi we-pc, indlela yethu inentsingiselo enkulu kuwe ngokubeka izinto ezininzi kuyo kwaye ke ifayile ye-pcdecrepit iya kuzisusa zonke izinto nganye nganye kwaye ngokulula kuwe awunyanzelekanga ukuba wenze enye into ngaphandle kwalapha kwaye akukho nto ilungileyo ayiyi kuphinda iqale okanye iisetingi zesoftware eyahlukileyo kwaye kwaye kwaye ucime isoftware enye emva komnye ngokukhawuleza okukhulu Ngoku ke akufuneki ndikubonise yonke le nto ngoku, enkosi ngokujonga, yiyo loo nto kwaye ndiza kubona inqaku elilandelayo bye
Nciphisaizinga. (Umntu omdala / uSlang) (Isenzi) ukususa i-junk engafunekiyo kunye ne-clutter. Ukusetyenziswa: Ndifuna ngokweneneyazisaigaraji yam ukuze ndimise imoto yam.
qala i-chrome yenziwe nkulu
Kutheni le nto iiWindows ziza ne-bloatware engaka?
Ezi nkquboarekubizweibhlokokuba abasebenzisi abayifuni, kodwa sele befakiwe kwiikhompyuter kwaye bathatha indawo yokugcina. Ezinye zazo ziye zibaleke ngasemva kwaye zicothise iikhompyuter ngaphandle kwabasebenzisi abazi.NgoFebruwari 1 2019
- Nantsi imeko.
Ukhathazekile okanye ukunqongophala kwemfihlo Windows 10 okwethutyana, kodwa ngelixa uzama iLinux, awungekhe ukwazi ukutsiba. Mhlawumbi enye isoftware oyifunayo ayisebenzi kakuhle, okanye mhlawumbi ungumlandeli weWindows, ngaphandle kwemicimbi yabucala. Ungenzani? Kutheni ungasiphuculi? Ewe, zihlobo zam, ninokuzilungisa ngokupheleleyo iingxaki nge Windows 10 kwaye ususe i-junk engeyomfuneko enzima kuyo wedwa.
Ke masibone ukuba yenziwa njani kwaye ibiza malini. Kodwa kuqala, masibone ukuba umxhasi uxabisa malini. I-GlassWire sisixhobo esikubonisa ngexesha lokwenyani ukuba zeziphi iiapps ezicothisa unxibelelwano lwakho.
Isetyenziswa ngabaqeqeshi bezokhuseleko ukubeka iliso kwi-malware, ukuvimba umda we-bandwidth, kunye nokufumanisa umsebenzi okrokrisayo. Fumana iipesenti ezingama-25 ngekhowudi yesinikezelo kwikhonkco elingezantsi. (Upbeat music) Yintoni ephucula nangayiphi na indlela? Ewe, ngokwesichazi-magama sisenzi esithetha ukwenza into embi okanye engonelisiyo ngcono, kwaye ngokuqinisekileyo kubonakala ngathi yinjongo ka-Win. ukuba yi-dows i-10 Ameliorated edition, iprojekthi encinci esele ikho ukusukela nge2017.
Akukho lwazi luninzi ngoku olukhoyo emva kwale nto, kodwa ezinye amakhonkco amadala akhomba kuActrons, 'umntwana onama-90s othe wabiza i-Outtechnology ngokukodwa. Inzululwazi yezentlalo, ifilosofi, isayikholoji kunye neurology, ifilimu kunye nohlalutyo lwe-anime kunye nokungcangcazela njengezihloko ezinomdla. Ushicilelo oluphuculweyo lubonakala ngathi luyi-offshoot yabo Windows 10 faka iskripthi esasiphantse sakhubaza izinto ezinje ngoHlaziyo lweWindows kwaye senza uhlengahlengiso kwiWindows Explorer, kodwa iiwindows zakha zaphuma zinee-telemetry ezidityaniswe ngokunzulu, kungoko kufuneka indlela ethe ngqo yokugcina iiWindows ukuyenza ukufowunela igazi eligazini kwaye ufumane lonke ulwazi lwam.
Uhlelo oluphuculweyo lususa uHlaziyo lweWindows lweWindows, uCortana, uQeqesho, iMicrosoft Edge, iWindows Media Player, nazo zonke. usetyenziso lwe-appx ye-UWP kufakelo, ingasebenzi, ingasuswa, ayisasebenzi. Oku kuthetha ukuba ubukhulu bebonke buncitshisiwe.
Ukususa izinto ezinjalo ezingene ngokwendalo kufuna ukwaziswa kokutshintshwa kwezinye iimeko. Ukubulala uCortana, umzekelo, kukhubaza imenyu yokuQala kunye nokuKhangela kweWindows ngokukodwa. Ke i-Classic Shell isetyenziselwa ukubuyisela endaweni yakho, ke kuya kufuneka unikezele.
I-DirectX 12 ayinakuxhaswa ngokupheleleyo njengoko uHlaziyo lweWindows lweWindows ngaphandle kombuzo, kwaye ngokuqinisekileyo unamathele kuhlaziyo oluzenzekelayo. Ngapha koko, inkqubo yohlaziyo ngokwayo iyadinisa, ifuna ukuba unqamle kwi-intanethi, uphinde uvuselele okwethutyana uHlaziyo lweWindows lweWindows, njalo njalo njalo njalo. Kwanele ukutsho, ngelixa olu hlobo lweWindows lujolise kubucala, isiseko esingaphantsi kwezokhuseleko sinokubaluleka kunokuba unokucinga.
Kodwa intetho eyaneleyo. Kutheni le nto singazijongisi ngokwethu kwaye sibone enye into esiyincamayo egameni lokuphucula ubumfihlo? Into yokuqala endiyiqapheleyo kukuba iWindows Mail ayisekho. Ngubani osebenzisa iWindows Mail? Ngaba uphambene kangakanani ukuba ungasebenzisi isikhangeli sewebhu ukukhangela i-imeyile yakho? Kulungile, Boomer, yonwabela i-Outlook yakho.
Ke akukho Imeyile yeWindows, akukho Ivenkile yeWindows, kwaye akukho Microsoft Edge, konke esinako apha sisiKhangeli seFayile, yiyo loo nto. Ngapha koko, ngoku ndibona nolunye utshintsho. Luphi uluhlu lwezinto ezihliswayo zeFayile Explorer? Oko kuvakalelwa ngathi kuya kuba kakhulu, kwahluke kakhulu.
Sikwanemenyu yokuQala yakudala kwiWindows Vista kunye no-7 -Style. Kwaye, ewe, ngenxa yokuba kungekho Edge, u-Anthony ngoncedo waphosa indlela emfutshane kwi-Firefox kwidesktop. -Ukungagqibeki yiDuckDuckGo, ngokwenene? - Ewe. -Ngaba ngumgangatho weFirefox okanye ophuculweyo Windows 10 uhlelo? - Hayi, lolu lupapasho oluphuculweyo.
Ngokwenyani IFirefox kunye neThunderbird. - UKUKHULULEKA KUPHELA. - Intoni? I-ONLYOFFICE kunye neVLC Media Player zonke zafakwa kwangaphambili yinkqubo yokusebenza. -Awuzange uve ngeengcebiso ze-ONLYOFFICE apha.
Iingcebiso zobuchwephesha ezivela kwiLinus. Ithini iphepha lam leAmazon? Le yiTITAN X esetyenzisiweyo. Kulungile, kufuneka siyihlaziye.
Colton! - Ndilapha, kwenzeka ntoni? - Oh wow ulapho? (Ehleka umntu) Oko kwakupholile. Ndingabiza abantu ngokubiza amagama abo? lststore.com.
Hee, yhempe entle ngasendleleni, bafo. Kulungile yintoni enye esinokuzama apha? Kulungile, iphi ifayile yam? Lahla phantsi? -Ulungiso lwe-Windows Explorer ebizwa ngokuba yi-Old Explorer ebuyisela Windows 7 isimbo seWindows Explorer. Ke ayinayo iribhoni yesiko.
Ayinazo ezinye izinto. Yonke into ibhalwe ngokutsha. Kwaye kukho ifayile yoqwalaselo onokuyiguqula ukuze uzenzele ngokwakho.
Ndizisebenzise okwethutyana ngenxa yokufuna ukwazi, kodwa bazisebenzisa apha kuba ezinye zeenguqu abazenzileyo kwiWindows zichaphazele noMhloli. Ke kuye kwafuneka basebenzise i-Old Explorer ukuyilungisa ngandlela thile- Ewe, ndiyakuxelela ngoku ukuba inye kuphela into endinokuyikhathalela ukuba bayilungise kwaye kulapho ndikhangela into kwaye le folda enye iya nini Ndicofa ifolda, nina bastards! Ayisiyonto ndiyifunayo ndifuna ukuba inyuke ifolda.
Buyela kwiphepha elidlulileyo, ndiza kubuya. Isiqulathi seefolda phezulu sithetha ulawulo oluphezulu kulwakhiwo lolawulo. Ke oku kubonakala kuyinto eyoyikisayo Windows 10 uhlobo lweesetingi zemenyu, ngaphandle kokuba kukho izinto ezincinci apha, uninzi lwayo lunento yokwenza nezinto zetelemetry, ke iiwindows zihlaziya, imidlalo enje ngezinto zeXbox, izinto zetelemetry kunye neKhaya lokufowuna idityanisiwe.
Eyona nto intle eza kumbuzo inokucinywa- ndingayenza? Seta umgcini wekhusi? - Ndicinga njalo. Ibonisa, akunjalo? - Andazi, akunjalo? Lindani, nantsi, nanku ke, ndinayo, ndinayo. Ke ngekhe uyikhangele.
Ndicinga ukuba mhlawumbi kungenxa yokuba balucwangcisile uphando oluqhelekileyo ngokunjalo. -Ewe, ngaphandle kukaCortana, ukuKhangela kweWindows ngandlela thile kuyafa .- Ha, bendingazi ukuba esi sigcini se-bubble sisakhiwa kwiWindows.
Le yiklasi yeWindows Vista apha. Oko kwakupholile ngelo xesha. Ewe, ukukhawulezisa kwe-3D kwidesktop! Ngoku kujongeka ngathi kuyinyani, ndifuna nje ukubukela la maqamza kangangeentsuku - Siguquke ngaphaya kwescreen njengezinto ezikweli nqanaba-oko kuyothusa nayo, iithebhu yeWindows ayihambi ngenxa yesizathu esithile.
Zonke iithebhu ziyakwenza, kodwa kutheni kungenjalo Windows ithebhu? Kulungile, kulungile. Ndicinga ukuba kulungile - andikhange ndibeke benchmark- Kulungile. -Kodwa kubonakala ngathi kukhawuleza kakhulu kunesiqhelo Windows 10 ufakelo kufuneka lube njalo. -Ndithetha ukuba, imenyu yokuqalisa iphuma kwangoko, intle kakhulu.
Kodwa ndiyathetha ukuba lubi kangakanani olu phando? Ke makhe sijonge i-Counterstrike. Yinto enkulu leyo. Ukungakwazi ukufumana into enqumlayo kwidesktop kuyothusa.
Isazisi sokupakisha umqhubi
Akukho kubi ngaphezu kwale yakhelwe kwiWindows 10. -Ndicinga ukuba kunokwenzeka ukuseta iifolda zokukhangela zeqokobhe lodidi okanye ngoku kuthiwa yiShell evulekileyo. Ke ukuba ucofa ekunene kwimenyu yokuQala kwaye uye kuseto unokumisela yonke into apho, kodwa ngokungagqibekanga ayilungiselelwe oko ngokoluvo lwam.
Kungenxa yemenyu yokuqala ngokwayo. -Uyifumene, kulungile. Khangela kwi-intanethi, khangela iinkqubo kunye noseto, khangela iifayile.
Isetwe kukukhangela yonke into, mhlekazi .- Oh. Kulungile ke ndakwenza oko andixolisi ngalonto.
Ke yintoni enye esinokuzama apha? Ndiyathetha, umdlalo uza kulunga, akunjalo? Masidlale iDoom-ndiyathetha ukuba iDoom kufuneka ibaleke- Kukho igama eligqithisiweyo, kutheni kufanele ukuba njalo? -Kuba iakhawunti yomsebenzisi ongene nayo ngoku ingumsebenzisi ngqo. Ayisiye umlawuli- ngoba? -Awusafumani mabala okhuseleko- Ekunene-Uninzi lwezinto ezisemngciphekweni kwezokhuseleko zenzeka ngenxa yokuba abasebenzisi bengabalawuli. -Ekunene, kwaye akukho sizathu sinyanzelekileyo sokuba ngumlawuli ngaphandle kokufaka iinkqubo.
Kwaye ukuba uyazi iphasiwedi yomlawuli, ungasoloko uyifaka ukuba uyafuna, ngokungathi ubuya kwi-Mac- Ewe.- Ndifanele nditshintshele kwiMac.Phakathi koLwazelelo, kwaye nje, i-Finder yayingalunganga.
Ndiza kuyicingela- Kukho iindlela onokuzifumana, iPath Finder yenye yazo- Kulungile-Isoftware ehlawulelweyo, kodwa inyanisekile-kutheni yonke into ihlawulwa kwi-Mac? -Ewe, kuba unako ukuyithenga, uthenge iMac.
Kulungile, ewe sibaleka kwi-90 FPS okanye nantoni na. -Ewe, ilungile ngokugqibeleleyo.
Thatha izilo. -Kutheni ungazami umdlalo weDirectX 12? ngekhe isebenze ke hey. Kulungile nokuba yintoni--.
Ndifumene umpu ovela kwiTomb Raider. -Ewe, iya kuba njalo. Owu, ayothusi, akukho popup kwinkqubo yetreyi -up- Le inokuba yinto nje yobugcisa evela kwiClassic Shell.
Andiqinisekanga ngokupheleleyo. Bekungumzuzu oshushu, kodwa kusenokwenzeka ukuba asinazo ii icon ezifihliweyo. -Andifumani ndlela yokuzifihla.
Ndikuseto ngoku kwaye lilungile, hayi, uyabahambisa nje. Nokuba oopopayi abahambayo bahlukile kancinci. Ke unokuba ulungile.
Ikhibhodi yesikrini yaseJapan
Inokuba yinto nje yeklasikhi. Masidlale umdlalo wesithunzi ovela kwiTomb Raider, iDirectX 12. Nantsi ke amakhwenkwe.
Kutheni le nto uHlaziyo lweWindows lweWindows kufuneka luchaphazele oku? -Kubonakala ukuba kukho ulwandiso lwe-DirectX 12 ehla kuHlaziyo lweWindows kwi-Windows ngamaxesha ngamaxesha. Ke umbono kukuba unomdlalo owandisiweyo ongenawo, i-DirectX 12 ayizukusebenza ngokufanelekileyo-Ewe, iShadow yeTomb Raider yinto yomdlalo omdala kwaye ibonakala ilungile ubuncinci kwimenyu yokusebenza into enikezelwe kwi-injini ukuze ndikholelwe ukuba izakusebenza. KULUNGILE.
Ngokusemthethweni iDirectX 12 ayisiyiyo, kodwa ngokungekho mthethweni, ukuba uyizama ukusuka kumdlalo ukuya kumdlalo inokuthi isebenze kakuhle ngeloxesha- Ewe-akufuneki ubelapha, kodwa ndiyayithanda.
Umphathi womsebenzi omtsha ulapha. Kumnandi ukubona. Unokusetyenziswa kweGPU kunye nayo yonke loo nto intle nangona ndingaziboni iitemps apha ke ubuncinci buyiphindisela kwakhona- Ngokwenyani isekwe kuyo Windows 10 1903-Uyifumene-Ngo-1909 kufanelekile kodwa imifanekiso esemthethweni iyi-1903.
Kulungile, unokuthi emva koko uqaphele kwikona esezantsi ekunene ukuba unophawu lokudibanisa iwizard ye-intanethi- Ewe, ndingu- ewe kwaye yiyo loo nto-Kungenxa yokuba iiWindows azazi ukuba ndinayo i-intanethi Unxibelelwano- Luchanekile, kuba alukwazi ukubiza umnxeba ekhaya, alunakho- Iyaqondwa- -Yazi kuphela ukuba unxibelelwano lwasekhaya- Inomdla Nangona zonke izinto zetelemetry kufuneka zisuswe, sisekude umhla kufuneka ndikhohlise iiWindows ukuba azinasizathu sokuwusebenzisa kuba andinalo uqhagamshelo lwe-intanethi- Ewe -Ou, ilifu lokudala ngekhe lazi, ndikwanonxibelelwano lwe-Intanethi- Ewe-Ewe, ndiyibheja U-wi rd unika izinto ezininzi ezihla ngenxa yokuba ucinga ukuba awunalo unxibelelwano lwe-intanethi- kuba abanakukwazi ukujonga iserver yabo.
Awunakho ukufowunela ekhaya-ke icima i-telemetry kolunye usetyenziso ngokunjalo- ndicinga ukuba iAdobe yenye yezi zicelo zingena kwiWindows API yoku, kwaye i-API ngokwayo isusiwe. -Ndavula idesktop ye-Creative Cloud. Inguqulelo entsha iyafumaneka.
Qhubeka kwaye uhlaziye. Masibone ukuba iyamfumana. Makhe sibone ukuba ungayifumana ibhotile yamanzi kwi-lttstore.com.
Kulungile, ayizukuphela. Kudala ihleli apha iminyaka ngoku - ndibuyisa yonke into endiyithethileyo ngesoftware ekumgangatho ophezulu yeAdobe. -Kulungile, ke svchost, njengomphathi womsebenzi.
Wow, akukho nto ingako apho-ewe, kwaye ngokuhambelana nomoya we-OS, ndasebenzisa i-NVCleanstall ukufaka umqhubi we-NVIDIA. Ke sinobuncinci obungenanto kuloo nto, nayo. - Oo, ndicinga ukuba iyasicacisa ukuba kutheni iziva ikhawuleza kangaka.
Njengoko uyazi, ngamanye amaxesha nakwikhompyuter ekhawulezayo uvula i-hard drive yendawo kwaye ithatha imizuzwana eli-10 okanye eli-15 ngaphandle kwesizathu. Ifuna ukuvuselelwa njenge-log ngasemva, efuna ukuya-Ngokuchanekileyo. -KwiMicrosoft nayo yonke loo nto.
Uyazibuza ukuba zingakanani izinto ezifakwe kwinguqu yeVanilla yeWindows. -Akukho ntlekisa, nokuba kungathatha umzuzwana ukuvula nokugcwalisa uluhlu lolawulo, kuthatha umzuzwana, hayi imizuzwana eli-10- Ewe, ukufikelela kwigumbi elingaphezulu okanye enye yezinye iiseva zihlala zithatha ixesha elide- Elinye ixesha elide.
Kulungile nangona ndisebhankini ngoku kwaye iyaphendula ngokwaneleyo xa ithathela ingqalelo ukujikeleza g ngaphezulu konxibelelwano lwe-gigabit-ewe- heyi, i-Paint ye-MS isekhona-i-MS Paint ayiyiyo i-Spyware- bendisazi ukuba ndiyazi ukuba ulungile lonke ixa eli. Ipholile intle iya kuvela kuhlobo olusebenzayo, olwehlisiweyo lweWindows njengenguqulelo efakelweyo ebesikhe sathetha ngayo xa sisenza inqaku malunga neWindows 9, nangakumbi kuba yonke i-telemetry ihambile.
Kodwa ngokwembono yomthetho, yonke le ndawo ingwevu, ngokutsho oko. Ngokwewebhusayithi, le projekthi ngoku isemthethweni ngokugqibeleleyo, ngokusekwe kwi-EU Directive 2009/24, ebanika isiseko esifanelekileyo sokusebenzisana ngokukhuphela imifanekiso usebenzisa i-telemetry, kubandakanya nokusebenza, kwiwebhusayithi uqobo, nangona uphanga. Kuyenzeka ukuba ukwenze oko ngokusemthethweni, nangona kunjalo, ukuba uguqula umfanekiso weWindows ngokwakho, kwaye banamaxwebhu apheleleyo enkqubo, kunye nendawo yokugcina imibhalo evulelekileyo abanayo ilayisensi kunye nokukhuphela Windows 10 1909 kufuneka uyenze ngokwakho, nangona imifanekiso eyakhiwe kwangaphambili yonke isekwe kwi-1903.
Umthetho ecaleni, ukusetyenziswa komfanekiso weWindows onje ngale kuhle kakhulu kumntu ofuna ukuwuqhuba kwi-VM kumatshini weLinux umzekelo. Ukusetyenziswa kwansuku zonke andazi. Ukuba awudingi ezinye zezinto esizifumeneyo ukuba azisebenzi kakuhle, kwaye ukuba awunangxaki nokutsiba iihupu xa uhlaziya okanye usenza into efuna iimvume zolawulo ke iingcebiso zethu ezingcono kungenjalo, ngokunyaniseka, vele unikezele kwaye usebenze iiWindows okanye usebenzise iLinux ukuba ufuna ubumfihlo ngaphandle kwengxaki.
Ukuthetha ngokungabikho koxinzelelo kwiindawo zakho zabucala, i-MANSCAPED yenza ukuba ukwenziwa kwezinto ngendlela ekhuselekileyo kube lula kwaye kube lula ngePakethe yazo eyi-3.0 egqibeleleyo. Inezinto zokucheba umzimba ezigxotha amanzi nezisebenza ngamanzi.
Kwaye xa ubhalisela isiCwangciso seNtloko sococeko, uyakufumana ukugcwaliswa kwakhona kwekota kweemveliso zakho ozithandayo ezishicilelweyo kunye neemveliso zokutshintsha ezinye iincakuba zisiwe ngqo emnyango ngaphandle kwengxaki. Susa nje intloko yomphathi wengca yakho uyibuyisele entsha rhoqo emva kweenyanga ezimbalwa ukuqinisekisa ukuba ucheba ucocekile. Iphakheji yakho yokuzaliswa kwakhona ihlala iza nesipho sasimahla.
msvcp100.dll desmume engekho
Kwaye kule nyanga, jonga i $ 30 yeenyawo DusterpH yoLawulo lweDoodorant Spray, yasimahla ngokupheleleyo. Ndwendwela nje i-manscaped.com/TECH kwaye ufumane i-20% kwisaphulelo sakho sePakethe egqibeleleyo kunye nokuhanjiswa simahla kwamazwe aphesheya e-US, Canada, Australia nase-UK.
Ukuba ulonwabele eli nqaku, mhlawumbi jonga inqaku esilwenzileyo phantsi kweWindows 9. Yayiyiprojekthi epholileyo ngokwenene kwaye kufanelekile ukujongwa.
Sisebenza njani isixhobo se-decrapifier kwi-PC yam?
Nangona kunjalo, emva kovavanyo olwenziwe yi-CHIP kwi-Intanethi, esi sixhobo siphinda sityibilike isiqa esikhulu ngakumbi kumnatha. Ukusebenza kwe-PC Decrapifier kulula: kuya kufuneka uqale ifayile ye-ExE kwaye ucofe kwimenyu inyathelo ngenyathelo. Isixhobo sicebisa ngokuzenzekelayo iinkqubo zokuCima.
Kwenza ntoni ukurhoxisa indawo ukukhulula indawo?
'Ukunciphisa' kuye kwaba lixesha lobugcisa lokususa 'iCrapware', ukukhulula indawo kwikhompyuter yakho. Iyakwandiswa ukubandakanya iifayile ezingafunekiyo. . Ulindele ukuba ikhompyuter entsha ilungiselelwe kwaye ilungele ukuhamba. Kodwa ayisiyiyo. Ufakelo luhlobo oluqhelekileyo, useto luthanda iimbono ze-MS. Kwaye abakhi bahlawulelwa ukufaka isoftware 'yokubonisa'.
Ndingayisusa njani i-crapware kwikhompyuter yam?
Ukuba ufuna ukulahla le Crapware efakwe ngaphambili, unokukhetha ezimbini: nokuba ungafaka kwakhona iWindows engenanto okanye ususe iinkqubo ezingafunekiyo ngesixhobo esikhethekileyo. I-PC Decrapifier sisixhobo sokucima. Ifumanisa ezinye zeenkqubo ezicaphukisayo kwaye izisuse ngonqakrazo lwe mouse.
Ngaba ungaqhuba i-decrapifier kwiprofayili esele ikhona?
Ukubaleka kwiprofayili esele ikhona kumatshini 'osetyenziswayo' akuyi kuchaphazela naziphi na iiprofayili zomsebenzisi esele zikhona kwaye akuyi kunika ziphumo zilungileyo. # Funda iskripthi ukuze ubone ukuba yintoni na ekhubazekileyo, kwaye uphawule ngento ofuna ukuyigcina. Ngokuzenzekelayo ingxelo ebhaliweyo iyagcinwa kwi-SYSTEMDRIVEWindowsDCtranscript.txt.